Maxaa ka jira in Axmed Siilaanyo watay musharax uu u rabay xilka RW Soomaaliya? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
16th December 2014 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: 14-kii bishaan December, warbaahinta laga leeyahay deegaanada Somalilnad ayaa baahisay in madaxweynaha maamulka Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu baajiyey safar uu ugu ambabixi lahaa dalka Jabuut.
Safarka Siilaanyo ayaa si kedis ah u baaqday kadib markii warbaahinta Hargeya lagu wargeliyey iney tagaan garoonka si ay war uga sameeyaan safarka Siilaanyo.
Haddaba safarkaas uu ka baaqday Axmed Siilaanyo ayaa waxaa xilligaas soo baxay warar sheegaya in Siilaanyo Jabuuti uu aadi laahaa kulan uu la yeelan lahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Shabakadda Ramaasnews oo ay leeyihiin dad kasoo jeeda deegaanada Somaliland ayaa wax ka qortay waxa uu ku saabsanaan kualnka la doonayey inuu Jabuuti ku dhex maro madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh iyo madaxweynaha maamulka Somaliland, Axmed Siilaanyo.
Shabakaddan oo soo xiganeysa ilo diblomaasiyadeed oo aan la magacaabin ayaa sheegtay in kulanka hal abuurkiisa lahaa Madaxweyne Siilaanyo iyo xubnaha khusuusida ah ee ay ka go’do talada aqalka looga arimiyo Somaliland.
Axmed Siilaanyo iyo siyaasiyiin ku feker ah ayaa la sheegay iney doonayeen in xilka RW Soomaaliya loo magacaabo siyaasi kasoo jeeda Somaliland, kaasoo ah Maxamuud C/llaahi Jaamac “Sifir”.
Sida ilahan dublamaasiyadeed sheegeen, Axmed Siilaanyo iyo xubnaha ku fekerka ah ayaa olole dhawr jiho ah ku qaaday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh, sidii uu xilka Raysal cusub ugu magacaabi lahaa Dr. Maxamuud Cabdillaahi Jaamac “Sifir” oo xilligan ah wakiilka Somaliland ee dalka Keynya.
Sifir ayaa xilligii dowladdii Carta ka mid ahaa dowladdii Federaalkah aheyd ee Soomaaliya, wuxuuna mar noqday R/wasaare ku xigeen.
Sidoo kale, wuxuu sanadkii 2004 dowladdii RW Cali Maxamed Geeddi ka noqday wasiirka Wasaarada Dekedaha& Gaadiidka Bada, hase ahaatee wuxuu maamulka Somaliland ku biiray waqti dambe.
Dhanka kale waxa madaxweynaha Somaliland suurtagelinta arinkan uu isna xiriir toos ah ugala sameeyey madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, sidii uu u suurtogelin lahaa kulan uu ku kulansiiyo madaxweynaha Somaliya.
Madaxwayne Siilaanyo ayaa la sheegay inuu diyaar u ahaa in haddi madaxweyne Xasan Sheekh magacaabo Raysal wasaare kasoo jeeda waqooyi ay taasi fududayn doonto isfahamka wadahadalada u dhexeeya labadooda dhinac.
Waxaana ilaha diblomaasiyadeed intaas ku dareen in Madaxweynaha Somaliya iyo siyaasiyiin la taliya ay dalabkaa si cad u diideen saacadihii ugu dambeeyey ee madaxweynuhu uu u ambabixi lahaa dalka Jabuuti, kadibna madaxwayne Siilaanyo ka carooday hindisihiisa dhicisoobay, halkaasna uu gebi ahaanba dib ugaga laabtay kuna baabiiyey ambabixiisii Jabuuti.
Markii baarlamaanka Soomaaliya riday ayaa siyaasiga Feysal Cali Waraabe sheegay inuu diyaar u yahay inuu madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud talo ka siiyo RW badelaya C/weli Sheekh Axmed Maxamed.
Warkaani maaha mid ay Mareeg Media xaqiijin karto, hase ahaatee waxaa xaqiiqo ah in dhinacyo badan xusul duub u galeen sidii siyaasi iyaga u dhow loogu magacaabi lahaa RW cusub ee Soomaaliya, kaasoo haatan loo badniyao inuu noqon doon Cumar C/rashiid Cali Sharmarke.